Akụkọ Na Naịjirịa Na Ọgabiga: Mr Eazi kpughere # emPawa30 + More
Rave News Digest: Mr Eazi's # emPawa30, Senate na-ekwu okwu na nyocha nyocha ụgbọ elu na-adịghị mma maka Coronavirus, Lewandowski + More
Robert Wun na-anapụta Elekere Avant Garde na Nnakọta AW20
Mr Eazi alọtaghachila na usoro # emPawa30, Senate na-ekwu maka nyocha na-ezighi ezi maka coronavirus n'ọdụ ụgbọelu Nigeria, Lewandowski pụọ n'ihi mmerụ ahụ. Nọgidenụ mara na Rave News Digest nke na-achịkọta akụkọ ise kachasị ewu ewu ịchọrọ ịchụkwudo, na-azọpụta gị oge na ume. Tụlee ya na akụkọ ụbọchị gị.
1. Mazị Eazi weghachiri mmemme emPawa Africa na # emPawa30
Mr Eazi's # emPawa30
N’abalị iri abụọ na isii n’ọnwa Febụwarị afọ 26, onye ọbụ abụ onye Naịjirịa nwere uche Oluwatosin Ajibade, nke a maara dị ka Mazizi Eazi, ekwuputala ọkwa ikike maka # emPawa30, agba nke ikpeazụ nke mmemme emPawa Africa a na-eme ememme.
A họrọla ndị omenkà 30 Africa isonye na mmemme a - onyinye ntinye nke na-enye ndị nka n’etụtara ngwa ọrụ, mbido ego na nkuzi iji bụrụ ndị na-azụ ahịa.
N'ajụjụ ọnụ taa na Rolling Stone, Mr Eazi kwuru nke a maka mmemme emPawa, “O nwere ike ịbụ olu; ọ nwere ike ịbụ mmụba. Mgbe ahụ anyị ga-eme omimi miri emi - kedu ihe ha na-etinye na profaịlụ ha, abụ ndị ọzọ. Anyị meghee aka anyị ka ha zitere anyị ụfọdụ egwu. Mgbe ahụ, anyị kwenyesiri ike, anyị na-eziga ha na ndị na-emepụta ihe iji mara ma ha ga-abanye ma mepụta ihe. Anyị mechaa usoro ndị ahụ.
Onye ọ bụla na-eme ihe nkiri na # emPawa30 ga-enweta onyinye $ 10,000 anaghị akwụghachi ụgwọ maka ịse vidiyo egwu izizi nka nke ọkachamara, yana nkuzi, ọrụ ahịa na nkwado ndị ọzọ iji bido ọrụ ndekọ ndekọ mba ụwa ha.
Ndi okacha amara iri nke gosiputara nkwa kachasi nma bu onye a ga-enara gaa na akwukwo izu ato di na Gini ga - abali June 10. Ha ga anata ahia, ide ukwe, ahia na imu ihe. N'ime ndị a, ndị na-ese ihe abụọ ga-enweta ego ọzọ iji kpuchie njikwa, ahịa na ụgwọ iwu n'oge 2020, yana ịmepụta egwu na vidiyo ndị ọzọ.
2. Enweghị nyocha ziri ezi nke ndị njem maka Coronavirus n'ọdụ ụgbọelu Nigeria na-ekwu, Senate
Onye isi oche nke Senate, Ahmad Lawan, na Thursday, gosipụtara na Federal Ministry of Health maka etinyeghị ihe dị mkpa iji gbochie ntiwapụ nke Coronavirus na Nigeria. Ya mere, ọ gbara ndị Kọmitii Sineti maka nlekọta ahụike mbụ ka ya na ndị ọrụ anyị na-aga ozi iji mee ka nyocha nke ndị njem na ọdụ ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ mmiri mba ahụ.
Lawan kwupụtara nke a na-esote usoro nke Onye isi ndị otu Senate, Senator Ajayi Boroffice. Boroffice dọọrọ uche ndị Senate maka ọdịda nke ndị ọrụ ahụ ike n'ọdụ ụgbọelu na ọdụ ụgbọ mmiri iji nyochaa ndị njem na-abata na mba ahụ nke ọma.
Ọ kọwara na enwetara ya nyocha nke Coronavirus mgbe ọ bịarutere na ọdụ ụgbọ elu South Africa na nso nso a. Okwuru na nyocha a na ọdụ ụgbọ elu South Africa na-ewekarị nkeji iri atọ tupu e nye ndị njem ikike ịhapụ ụgbọ elu ahụ.
O kwuru na ọnọdụ ahụ dị iche na ọbịbịa ya n'ọdụ ụgbọ elu Nigeria mgbe ndị ọrụ ahụike na ọdụ ụgbọ elu mba ahụ nyere naanị mpempe akwụkwọ maka ndị njem iji gosi ma ha na-arịa ọrịa ma ọ bụ na ha adịghị.
3. Rwanda tufuru igha egwu dika onye nwuru anwu
Ndị ọchịchị Rwanda amachibidola egwuregwu na-adịghị mma maka ọnwụ onye ọbụ abụ dere Kizito Mihigo, onye nwụrụ na ndị uwe ojii ụbọchị 10 gara aga. Ndị ọka iwu na-ahụ maka nyocha ọka na mba kwuru na nkwupụta nke Rwandan Investigation Bureau gosipụtara na o jiriwo ndụ ya site n'ịkwụgide onwe ya na ihe n'ụlọ nga. Ndị uwe ojii na-arụ ọrụ n'abalị ahụ kwuru na ọ nweghị ọgba aghara a nụrụ.
Onye na-agụ egwú, nke aha ya bụ Kizito ama ama, nwụrụ ụbọchị atọ ka e jidere ya n'akụkụ oke ala na Burundi. E boro ya ebubo na ọ nwara ịgbaga obodo ahụ ma sonyere ndị otu nnupụisi na-ebuso gọọmentị Rwandan agha.
4. Onye osote onye isi ala Iran na ụmụ nwanyị na ezin’ụlọ nke Coronavirus butere
Onye osote onye isi ala Iran maka ụmụ nwanyị na ndị ezinụlọ, Massoumeh Ebtekar
Masoumeh Ebtekar, onye na-esote onye isi ala Iran maka Womenmụ nwanyị na Ihe Ndị Na-ahụ Maka ezinụlọ, nwalere nti maka Coronavirus.
A makwa onye osote onye isi ala ahụ dịka onye na-ekwuchitere asụsụ Bekee maka ndị njide mmadụ nke afọ 1979 weghaara ụlọ ọrụ ndị nnọchianya US na Tehran ma kpalite ọgba aghara ụbọchị 444.
Na Tuesday, ndị isi Iran gosipụtara na osote onye isi ala ahụike Iraj Harirchi bute ọrịa, ọ nọkwa na iche iche.
Ọtụtụ mmadụ nwụrụ na Iran site na nje karịa ebe ọ bụla ọzọ na mpụga China. Mba abụọ ahụ nwere njikọ azụmaahịa siri ike.
Mba ndị ọzọ dị ugbu a bụ ndị South Korea na ,tali, ebe okwu agbadoro na nso nso a.
5. Robert Lewandowski ga-aga izu anọ maka mmerụ ahụ
Robert Lewandowski gbara ihe mgbaru ọsọ 11 nke Champions League ya na egwuregwu isii nke oge a megide Chelsea
Onye mmeri Bayern Munich Robert Lewandowski ga-atụpụ ụkwụ nke abụọ nke njikọ Champions League ha na Chelsea mgbe agbatịchara izu anọ wee merụọ ya ahụ. Onye mba Poland nyeere mmadụ abụọ aka Serge Gnabry ihe mgbaru ọsọ ma kwụọ nke atọ ka Bayern merie 3-0 na Stamford Bridge na ụkwụ mbụ na Tuesday.
Bayern kwuru na ọ gbajiri ọgịrịga ya n'akụkụ nkwonkwo ikpere aka ekpe n'oge egwuregwu ahụ. Onye dị afọ iri atọ na atọ ahụ ga-elele egwuregwu isii.
Ozi Ubochi Izu Izu anyi na-ewetara gị nchịkọta akụkọ ise kachasị ewu ewu taa gụnyere Akụkọ kacha ọhụrụ na Naịjirịa, ozi Afrika, akụkọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ozi mba ụwa, akụkọ Hollywood, akụkọ egwuregwu na akụkọ banyere ndị na-eme ememme Naijirịa na ndị Africa. Ọzọkwa, tụọ anya akụkọ kacha elu na akụkọ ndị ọzọ na - eme ọhụụ taa n'ofe Sahara. Nchịkọta nke akụkọ kacha ọhụrụ na Naijiria ugbu a 2020.
Radị Rave February 27, 2020
ATBỌCH:: Oge sitere na Adesua Etomi-Wellington ụbọchị ncheta ọmụmụ nke iri atọ na atọ
Rave News Digest: Naira Marley ejidere, Oprah na-azụta bọọdụ mkpọchi iji chọọ ikpe ziri ezi, Willian + More